Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » IATA dia manontany ny filan'ny fitsapana PCR lafo vidy
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny Flying to Hawaii dia mitaky CORID PCR - 19. Orinasa lehibe io ho an'ny maro, ao anatin'izany ny orinasa toa ny Longs Drugs, Walgreens, ary maro hafa. Ny vidin'ny $ 110- $ 275 amin'ny fitsapana tsy maintsy atao mba hisorohana ny quarantine dia mety ho lalina sy mahakivy ny fianakaviana. Fantatry ny IATA fa tsy misy vokany io rehefa manandrana manidina ny olona indray.
Mifanipaka sy misavoritaka ny lalàna mifehy. Ny fahatongavana any Etazonia dia midika hoe fitsapana antigen tsy lafo ary matetika maimaim-poana dia tsara raha mbola manohy hatrany Hawaii, dia ilaina ny fanandramana PCR lafo be kokoa.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia niantso ny governemanta handray andraikitra hiatrehana ny vidin'ny fitsapana COVID-19 any amin'ny faritra maro ary nanentana ny fahafaha-mamela amin'ny famelana ny fitsapana antigen mahomby ho solon'ny fanadinana PCR lafo vidy kokoa.
IATA koa dia nanoro hevitra ny governemanta handray fitarihana vao haingana an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) mihevitra ny fanakanana ireo mpandeha vita vaksiny tsy ho takiana amin'ny fitiliana.
Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpandeha zotra vao haingana nataon'ny IATA dia 86% amin'ireo mpamaly no vonona hizaha toetra. Saingy ny 70% dia mino ihany koa fa ny saran'ny fanandramana dia sakana lehibe amin'ny fivezivezena, fa ny 78% kosa dia mino fa ny governemanta dia tokony hitondra ny vidin'ny fitiliana tsy maintsy atao.
"Iată manohana ny fitsapana COVID-19 ho làlana iray hanokafana ny sisin-tany mankany amin'ny dia iraisam-pirenena. Saingy ny fanohanantsika dia tsy misy fepetra. Ho fanampin'ny maha-azo itokisana azy, ny fitsapana dia mila mora azo, mora vidy ary mifanaraka amin'ny ambaratonga atahorana. Governemanta be loatra, na izany aza, dia tsy mahavita ny sasany na izy rehetra. Ny vidin'ny fanandramana dia miovaova be arakaraka ny faritra, tsy misy ifandraisany amin'ny tena vidin'ny fanaovana ny fitsapana. UK dia zaza afisy ho an'ny governemanta tsy mahay mitantana tsara amin'ny fitsapana.
Ny tsara indrindra dia lafo, amin'ny fanararaotana ratsy indrindra. Ary na amin'iza na amin'inona, dia tranga manala baraka fa miampanga VAT ny governemanta, ”hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
Ny taranaka vaovao amin'ny fitsapana haingana dia ambany noho ny $ 10 isaky ny fitsapana. Nanome fitsapana rRT-PCR fanamafisana notanterahana ho an'ny valin'ny fitsapana tsara, ny tari-dalan'ny WHO dia mahita ny fanandramana antigène Ag-RDT ho fomba azo ekena amin'ny PCR. Ary, raha takiana tsy maintsy atao ny fitsapana, ny an'ny WHO Fitsipika iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (IHR) milaza fa na ny mpandeha na ny mpitatitra dia tsy tokony hitondra ny vidin'ny fanandramana.
Ny fitsapana dia mila mifanaraka amin'ny haavon'ny fandrahonana koa. Ohatra, any Angletera, ny angona farany momba ny Sampam-pahasalamana Nasionaly momba ny fitsapana ireo mpitsangatsangana tonga dia mampiseho fa mihoatra ny 1.37 tapitrisa ny fitiliana natao tamin'ny fahatongavan'ireo firenena antsoina hoe Amber. 1% fotsiny no nosedraina nandritra ny efa-bolana. Mandritra izany fotoana izany, efa ho avo telo heny ny isan'ireo tranga tsara dia hita amin'ny ankamaroan'ny mponina isan'andro.
“Ny angona avy amin'ny governemanta UK dia manamafy fa ireo mpandeha iraisampirenena dia tsy mametraka ahiahy firy amin'ny fanafarana COVID-19 raha ampitahaina amin'ny tahan'ny aretina ao amin'ny firenena. Farafaharatsiny farafaharatsiny, noho izany, ny governemanta UK dia tokony hanaraka ny fitarihan'ny WHO ary hanaiky ny fitsapana antigen izay haingana, mora vidy ary mahomby, miaraka amin'ny fanandramana PCR manamarina ho an'ireo izay manandrana tsara. Mety ho làlana iray ahafahan'ny olona tsy vita vaksiny miditra amin'ny fivezivezena izany, ”hoy i Walsh.
Ny famerenana indray ny dia iraisam-pirenena dia zava-dehibe amin'ny fanohanana ny asa fivezivezena sy fizahan-tany 46 tapitrisa manerantany izay miankina amin'ny fiaramanidina. “Ny fanadihadianay farany natao dia manamafy fa ny hala-bidy amin'ny fanandramana dia hitondra amin'ny endrika fanarenana. Tsy misy dikany firy ho an'ny governemanta ny mandray fepetra hanokafana ny sisin-tany raha toa ka tsy mahasakana ny ankamaroan'ny olona izany. Mila restart mora vidy ho an'ny rehetra izahay, "hoy i Walsh.